मर्नुभन्दा ठिक पहिले धेरैजसो मानिसहरु के भन्छन् ? नर्सले गरिन् आश्चर्यजनक खुलासा – List Khabar
Home / रोचक / मर्नुभन्दा ठिक पहिले धेरैजसो मानिसहरु के भन्छन् ? नर्सले गरिन् आश्चर्यजनक खुलासा
admin November 25, 2021 रोचक Leaveacomment 62 Views
काठमाडौं। अमेरिकाकी एक नर्सले सामाजिक संजालमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेकी छिन् । यी नर्सको नाम जुली हो । उनका अनुसार मर्नुभन्दा ठिक पहिले धेरैजसो मानिसहरु एउटै किसिमको कुरा गर्छन् । जुलीका टिकटकमा ३ लाख ७२ हजार फलोअर छन् जहाँ उनले आफ्ना अनुभवहरु साझा गरेकी छिन् ।
हस्पिस नर्स जुलीका अनुसार उनले क्यालिफोर्नियाको लस एन्जल्समा लगभग ५ वर्षसम्म काम गरेकी छिन् । त्यसअघि उनी ९ वर्षसम्म आइसीयू नर्स थिइन् । उनी करिब १४ वर्षदेखि नर्सको काम गरिरहेकी छिन् । जुलीले जुनसुकै बेला मर्न सक्ने
अत्यन्तै बिरामी मानिसहरुको हेरचाह गर्छिन् । उनले धेरै मानिसहरुलाई आफ्नो आँखाअगाडि प्राण त्यागेको देखेकी छिन् । हालै उनले आफ्नो टिकटक भिडियोमा मर्नुभन्दा अगाडि मानिसहरु के भन्छन् भन्ने खुलासा गरेकी छिन् ।
जुलीका अनुसार उनले मृत्युभन्दा ठिक पहिले आफ्ना धेरैजसो बिरामीको सास फेर्ने तरिकामा परिवर्तन भएको देखेकी छिन्। बिरामीहरुमा त्यतिबेला छालाको रंगमा परिवर्तन्, ज्वरो आउनु, पटक पटक आफ्ना नजिकका व्यक्तिको नाम लिने आदि लक्षण देखेकी छिन् ।
Previous भोलि १० गते सवारी आवातजावत बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो?
Next १८ वर्षीया किशोरी सुजितासँगै तीन जना युवक कोठाभित्र स’मातिए